Shuruudaha iyo Xeerarka | Boston School Finder
Adoo kagalaaya barta ciwaanka bostonschoolfinder.org, waxaad ogolaanaysaa inay kuqabanayaan shuruudahaan adeegu, dhamaan sharciyada iyo xeerarka laxariira, waxaadna aqbalaysaa inaad masuul katahay inaad raacdo wixii sharciyo maxali ah oo arintaan laxariira. Haddii aadan aqbalayn wax kamid ah shuruudahaan, waxaa lagaa mamnuucayaa inaad gasho ama isticmaasho bartaan. Macluumaadka kujira bartaan waxaa lagu difaacaa sharciga xaquuqda daabacaada iyo astaanta ganacsiga.
2. Adeegsiga Shatiga
Ogolaansho ayaa laguu siinayaa si kumeel gaar ah inaad soo dagsato hal koobi oo macluumaadka ah (macluumaad ama software) ood kasoo dagsato barta Boston School Finder adoo u adeegsanaaya sababo shaqsi ah, oon laxariirin ganacsi aad kaliya akhrinayso. Tani waa ogolaansho shati, mana ah inaad macluumaad wareejiso, shatigaan markaad hesho uma adeegsan kartid:
wax kabadelka ama koobi kala bixida macluumaadka;
adeegsiga macluumaadka oo aad u adeegsato ujeedo ganacsi, ama sabab kale ood bulshada ugu dhex faafiso (mid ganacsi ama mid aan ganacsi ahaynba);
iskuday ah inaad isdaba mariso ama wax kabadasho naqshada farsamo ee software kasta oo kujira barta Boston School Finder;
inaad kasarto wax xaquuqda daabacaha ah ama cadayn kale oo quman kuna dhagan macluumaadka; ama
inaad macluumaadka uwareejiso qof kale ama "aad kushubato" macluumaadka seefar kale.
Shatiga ayaa si ootomaatig ah kaaga xirmaaya haddii aad kuxad gudubto wax kamid ah xanibaadahaan waxaana lagaa saari karaa barta Boston School Finder xiligii ladoono. Marka lagaa mamnuuco inaad macluumaadkaan aragto ama marka lagaagala noqdo shatiga, waa inaad baabi'isaa macluumaad kasta oo aad soo dagsatay ood haysato haduu yahay mid elegtaroonig ah ama mid aad daabacday.
3. Iska bari yeelid
Macluumaadka kujira barta Boston School Finder waxaa lagu baxshaa inay yihiin kuwo aasaasi ah. Boston School Finder mabixinayso wax damaanad ah, mid hadal ah ama mid qoran, waxayna halkaan iskaga bari yeelaysaa ayna kudiidaysaa dhamaan damaanad qaadyo kale oo kasta ayna kujiraan, si bilaa xadidaad ah, damaanadaha qoran ama shuruudaha ganacsiga, ku aadinta ujeedo gaar ah, ama xatooyo la'aanta ee hantida dadka kale qorteen ama xad gudubyada kale ee dhanka xaquuqda.
Waxaa intaas siidheer, Boston School Finder wax damaanad ah kama bixinayso ama masamaynayso wax matalaado ah oo laxariira saxnimada, natiijooyinka soo bixi kara, ama kalsoonida lagu qabi karo adeegsiga macluumaadka kujira barteena ama hadii kale laxariira macluumaadkaas ama bar kasta oo kuxiran bartaan.
Majirto dhacdo Boston School Finder ama adeeg bixiyaasheedu masuul kanoqonayaan wax waxyeelo ah (ayna kujiraan, si aan xadidnayn, waxyeelooyinka luminta macluumaadka ama faa'iidada, ama sababo laxariira carqalad ganacsi) ee kadhasha adeegsiga ama awoodid la'aanta macluumaadka kujira barta Boston School Finder, xataa haddii barta Boston School Finder ama wakiil fasax kahaysta Boston School Finder lagu wargaliyay cod ahaan ama qoraal ahaan suurtagalnimada dhibaato imaan karta. Sabab laxariirta sharciyada qaar oo aan ogolanayn xadidaadaha laxariira damaanadaha qoran, ama xadidaadha dhanka eed qaadista ee dhacdooyinka cawaaqib xumada ama kama'a kuyimaada, waxaa suurtagal ah inaysan xadidaadahaan adigga kuqusayn.
5. Toosnaanta macluumaadka
Macluumaadka kasoo baxa webseetka Boston School Finder waxaa kujiri kara khaladaad dhanka farsamada ah, qoraal, ama shaxda ah. Boston School Finder madamaanad qaadayso in wax kamid ah macluumaadka kujira barteedu yihiin kuwo sax ah, dhamaystiran ama cusub. Boston School Finder waxay isbadelo kusamayn kartaa macluumaadka kujira webseetkeeda xiligay doonto ayadoon ogaysiis bixin. Hase yeeshee Boston School Finder waajib kuma aha inay cusboonaysiiso macluumaadka.
Boston School Finder dib u eegis kuma samayn dhamaan baraha kuxiran webseetkeeda masuulna kama aha mawduucyada kujira wax kamid ah barahaas kuxiran webseetkeeda. In bar kale kuxiran tahay kama dhigna in Boston School Finder ay taageerayso barta. Adeegsiga webseetka noocaas ah ee barteena kuxiran waxaa masuul ka ah isticmaalaha.
Boston School Finder waxay dib u eegis kusamayn kartaa shuruudahaan adeegga ee barteeda xiligay doonto ayadoon ogaysiis bixin. Adoo adeegsanaaya bartaan waxaad aqbalaysaa inaad raacdo nooca cusub ee shuruudaha adeegga.
8. Sharciga Lagu Maamulaayo
Shuruudahaan iyo xeerarkaan waxaa lagu maamulayaa laguna fulinayaa si waafaqsan sharciyada Boston, MA waxaadna si bilaa ikhtiyaar ah uracaysaa sharciyada maxkamadaha ee gobalkaas ama goobtaas.